Ukubhoboza - kuyini?
Amacici amacici amacici-ama-carnations, avela ekuqaleni kwekhulu leminyaka elidlule. Leli gama elilula elitholile kubantu, ngoba lifana nama-clove efomu futhi ayinayo i-clasp ebonakalayo. Abesifazane abaningi bemfashini, befuna ukuhlobisa kwangempela, ukuhlangana leli gama bayesaba futhi bacabange: "Amaphakamisi - uyini"? Njengoba sibona, impendulo ilula. Manje sidinga ukuqonda ukuthi bathini.
Njengoba isikhathi eside njengoba igolide libhekwa njengophawu lokuchuma, abesifazane abaningi bemfashini bayabheka njengesibopho sabesifazane ukuba babe nokuqoqa izesekeli zabo okungenani ngamacici amabili egolide. Abaqambi, nabo, bafaka isithakazelo kulo mhlobiso ngobuningi bamacici ahlukile, ahlukene ngesitayela, ukuklama, injongo, ubukhulu kanye nezindleko eziphezulu. Uma ufuna ukukhetha into enama-laconic nokunethezeka, khona-ke kufanele uqaphele amacici e-stud ngeparele elikhulu, "elilala" embali noma e-petal. Lesi sici sizofaka ekwenzeni ngcono kokulungiswa nokuthethelela. Ngaphezu kwalokho, amaparele - lokhu kuhlanganisa okukhulu ekamelweni lokuhlwa.
Okukhanyayo futhi okubizayo kuzobukeka njengama-pocket ngebheyili elikhulu yesimo se-geometric esifanele. Isibonelo esihle amacici ane-square emerald, ehlala phansi. Igolide elincane elibomvu nelomvu libhekwa njengenye yezinhlanganisela ezinhle kakhulu. Kulesi simo, igugu elikhulu libukeka lihle futhi lihle kakhulu.
Ufuna ukuzikhethela umhlobiso wangempela , kodwa awuhlezi kahle? Qaphela amaphepheni ngezibalo ezihlakaniphile kodwa ezidalwe ngaphandle:
Phakathi nendawo yokwakhiwa kungaba nedayimane elincane, elizodlala ngokugcwele ekukhanyeni, ngaleyo ndlela linike ukukhanya kumhlobiso wakho.
Amapulangwe ayenziwe ngesiliva
Amacici emicengezi yesiliva angabonakala emikhankanyeni evamile kakhulu, ngoba ayithengeka futhi efanelwe ukusiza ukugqoka nsuku zonke. Namuhla, kunezinhlobo eziningi zesiliva zesihlwa, okungaba kokubili ngamatshe, futhi ngaphandle kwazo.
Ukuze uthole i-classic-case-case, ungakhetha i-punch ngethambo elincane noma itshe elizungezile elizungezile. Lo mhlobiso uzogcizelela ngempumelelo ukuvinjelwa kwesithombe sakho, kodwa awukumthandi wokukhohlisa.
Ukuze uthole izingubo zansuku zonke eziphathekayo, ezifana ne-trousers, ihembe noma i-blouse, kufanele ukhethe okuthile okungavamile, kodwa hhayi okugqamile kakhulu. Kungaba "ukuqoshwa" ngezibalo ezinjengalezi:
Qaphela ukuthi izingubo zansuku zonke kungcono ukhethe amacici ngaphandle kwamatshe noma ngamatshe angamagugu angamagugu angasayizi omkhulu.
Ngokumangalisayo, indima eyinhloko ekwakhiweni kwamacici angadlala izitshalo eziyigugu kuphela, kodwa futhi namatshe. Ezweni akekho owesifazane ongenandaba nokujula kombala, ukulungiswa nokugqama kwalesi sakhiwo semvelo. Ingxenye yangaphandle ye-bead ingahlobisa itshe elilodwa elikhulu noma ukwakheka kwamatshe amaningana, okudingeki ukuba abe nezinhlobo ezifanayo. Amanye ama-jewelers acabangela ukugibela i-mosaic yamatshe amaningana ahlukene. Zingafakwa ngendlela yembali, i-lopist, izithelo ezithile noma i-berry, inambuzane.
Kule ndaba, akulungile ukukholelwa ukuthi amatshe ayigugu kuphela anganqotshwa, futhi ababukeka bebukeka behle kakhulu:
Amakhosi abhekene nakho akwazi ukudala amatshe amatshe ayigugu okukhulunywa ngawo ngokuthi ubuhle bawo abuphansi kunezinto eziyigugu. Ngakho-ke, abesifazane abaningi bakhetha ukukhetha ubucwebe obunjalo, ngakho ubuhle babo buphansi kakhulu.
Imoto yokugqoka yama-Moto
Isikhwama sikaBeanie - izithombe ezingu-45 zamamodeli enhle kakhulu
Izikhwama zesikhumba - izesekeli zezimpawu zomkhiqizo ze-fashionistas zangempela
Izimbongolo "Izindlovu ezintathu"
I-Pantyhose Pierre Carden
Iphunga lomfana osemncane
Izibuko zemibukiso ye-Aviator
Amacici ane topazi - izithombe ezingu-41 zamacici amahle kuwo wonke ukunambitheka
I-Scabies yizibonakaliso zokuqala
Kungani unomhawu kimi, mngane?
I-Etachtachyte - ukwelashwa
Isitayela se-vintage - imithetho yokudala isithombe sefashini ngesitayela sokuvuna
Yini enikeza ukusebenza ekuseni?
Amabhandlela Animaldi - imfundo yabantwana
Ukufudumala kwe-socle ne-penokleksom
I-Yoga yabesifazane abakhulelwe: 1 trimester
Amasiko - amasiko
Ijaji labesifazane ngaphandle kwekhola
Ikhekhe "I-Trumpet Stump" - iresiphi yama-classic
Ukukhipha isisu ngemva kokukhipha isisu
Pie nge jam on kefir
Iholide laseDolobheni (iGhent)
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngo 10 kg?
Iminyango yangaphakathi ihlile i-oak
Skimmer for pool lokubhukuda
Imisebenzi yonyaka omusha ye-kindergarten yakho